Muwaadiniinta Mareykanka, iyo UK ee ku sugan Afgaanistaan oo digniin loo jeediyay
HomeWararka CaalamkaMuwaadiniinta Mareykanka, iyo UK ee ku sugan Afgaanistaan oo digniin loo jeediyay
October 11, 2021 Wararka Caalamka, Wararka Maanta Somaliska 0
Mareykanka iyo Britain ayaa uga digay muwaadiniintooda inay ka fogaadaan hoteellada ku yaalla Afgaanistaan, maalmo kaddib markii daraasiin qof lagu dilay masaajid weerar ay mas’uuliyaddiisa sheegatay dowladda Islaamiga ah ee Gobolka Khorasan, ISKP (ISIS-K).
Daalibaan oo awoodda la wareegtay bishii Ogosto kuna dhawaaqday imaarad Islaami ah ayaa raadineysa aqoonsi caalami ah iyo kaalmo si looga fogaado musiibo bani’aadamnimo loona yareeyo dhibaatooyinka dhaqaale ee Afghanistan.
Laakiin, marka kooxda hubaysan ay ka gudubto ciidan fallaagoobay oo u gudubto awood maamul, waxay la halgameysaa sidii ay u xakamayn lahayd halista uga imaanaysa ISIL qaybteeda Afgaanistaan.
“Muwaadiniinta Mareykanka ee ku sugan ama ku dhow Hotel Serena waa inay si dhaqso leh uga baxaan,” ayay tiri Waaxda Arrimaha Dibadda Mareykanka, iyadoo tixraaceysa “khataraha amniga” ee aagga.
Tan iyo markii ay Taliban la wareegtay, ajaanib badan ayaa ka tagay Afghanistan, laakiin qaar ka mid ah suxufiyiinta iyo shaqaalaha gargaarka ayaa weli ku sugan caasimadda.
Hoteelka caanka ah ee Serena oo ah hoteel raaxo leh oo caan ku ah dadka u socdaalaya ganacsiga iyo martida ajaanibta ah ayaa labo jeer bartilmaameed u noqday weerarada ay fuliyaan kooxda Daalibaan.